Dr. Tint Swe's Writings: EDD ကလေး ဘယ်တော့မွေးမလဲ
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်မအသက်က ၂၆နှစ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပါရှင့်။ ကိုယ်ဝန်က LMP နဲ့တွက်ရင် ဒီနေ့ဆို 21weeks 5days ရှိပါပြီ။ Ultrasound ရိုက်တာ ၂ ကြိမ်ရှိပါပြီ။ ပထမအကြိမ် Ultrasound ရိုက်တာက ကိုယ်ဝန် ၈ပတ်မှာရိုက်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ultrasound result မှာက ကိုယ်ဝန်က ၇ပတ်ဘဲပြပါတယ်ရှင်။ ဒုတိယအကြိမ် Ultrasound ရိုက်တာက ကိုယ်ဝန် ၂၁ပတ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ultrasound result မှာက ကိုယ်ဝန်က ၁၈ပတ်ကျော်ဘဲပြပါတယ်။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ သမီးအသက်က ၂၄ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ခု သားဦးကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားပါတယ်ရှင့်။ OG နဲ့ပြတော့ 4months + လို့ပြောပါတယ်။ သမီးက အပတ်ရေနဲ့တိတိကျကျသိချင်လို့ပါဆရာ။ ဘယ်လိုတွက်ရတာလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦးဆရာ။
၃။ ဆရာ ကျွန်မအသက် ၃၀ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ယခု ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးကိုယ်ဝန်ပါ။ ကိုယ်ဝန်သွားအပ်ရင် ဆရာဝန်က နောက်ဆုံးရာသီပေါ်ခဲ့တဲ့ရက်နဲ့ပဲတွက်ပြီး due date မှန်းကြပါတယ်။ အဲ့ဒီရက် အနီးတဝိုက်မှာ (ကန်တော့ပါဆရာ) အမျိုးသားနဲ့ အတူနေတာမရှိခဲ့ပဲ ရက်တော်တော်ခြားပြီးမှ အတူတူနေခဲ့တာရှိပြီး အတူနေခဲ့တဲ့ရက်ကိုလဲ သေသေချာချာ မှတ်မိတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီရက်ကို ကိုယ်ဝန်စရှိတဲ့ရက်လို့ သတ်မှတ်လို့ရပါသလားရှင့်။
၄။ ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင်။ သမီးက အသက် ၂၈နှစ်။ သားဦးကိုယ်ဝန်ပါဆရာ သမီးနားမလည်တာလေးမေးချင်လို့ပါဆရာ။ OG သွားအပ်တော့ ရာသီရက်မေးပါတယ်။ စလာတာ ၂.၁၁.၂၀၁၆ ပြီးဆုံးရက် ၄.၁၁.၂၀၁၆ ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ DD ကို ၈.၈.၂၀၁၇ ပြောတယ်ဆရာ။ နောက်ချိန်းရက်ပြပြီး ၇.၂.၂၀၁၇ ရက်ကျတော့ Ultrasound ရိုက်ပါတယ်။ Ultrasound က 8 week3day ဆရာ။ အဲ့ဒါ OG က သမီးရာသီလာရက်မှားတယ်တဲ့ DDက ၉ လပိုင်း လဆန်းလို့ပြောပါတယ်ဆရာ။ သမီးကရာသီလာရက်ကို အဲ့နောက်ပိုင်း လာ မလာ မမှတ်မိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒါ Ultrasound အဖြေက မှန်ဖို့ များတယ်မဟုတ်လားဆရာ။ DD နီးလာလို့ စိတ်ထဲမတင်မကျဖြစ်နေလို့ပါဆရာ။ DD ကျော်သွားမှာစိုးရိမ်နေ့ပါဆရာ။ ကိုယ်ဝန် ၃၀ ပတ်မှာ ultrasound ထပ်ရိုက်တော့ ၈.၉.၂၀၁၇ ပါဆရာ။ စာရှည်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာ။
၅။ ဆရာရှင့် ကိုယ်ဝန် EDD နဲ့ Gestational age ကိုတွက်တာကို မကျေမလည် ခံစားရပါတယ်။ ကျမတို့ကို သင်ပေးလိုက်တာ First day of LMP ကို ကိုးလနဲ့တပတ် သို့မဟုတ် အပတ်လေးဆယ် ပေါင်းရင် EDD မဟုတ်လားဆရာ။ အာ့ဆို တကယ့် ကိုယ်ဝန် duration က ၃၈ ပတ်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဆရာ။ ဘာလို့ဆို LMP ပြီးနောက်နှစ်ပတ်ခန့်မှ သားဥကြွေပြီး ကိုယ်ဝန် စရနိုင်မှာလေ။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ EDD ပဲတွက်တွက် GA ပဲတွက်တွက် ဒီ LMP ကပဲတွက်ယူရလဲ နားမလည်ဘူးဆရာ။ ဘယ်သူမှလည်း မဖြေရှင်းပေးကြဘူး။ ကျမပဲနားလည်မှုလွဲနေတာလားဆရာ။ ဥပမာဆိုရင် LMP နောက်ဆုံးရာသီလာရက် = 10.3.2015 နဲ့ Ovulation day မျိုးဥထွက်တဲ့ရက် = 24.3.2015 ဖြစ်ရင် GA သန္ဓေအသက် = 9.4.2015 ဆိုတာ (၄) ပါတ်လား၊ (၂) ပါတ်လား။ LMP နဲ့ ovulation ရက်ကြားနှစ်ပတ်ခန့်ကို ထည့်တွက်တော့ ကိုယ်ဝန်သက်က အမှန်မဟုတ်ပဲ နှစ်ပတ်ပိုနေမှာပေါ့ဆရာ။ မရိုမသေပါဆရာ LMP = 10.3.2016 ဆိုရင်ကောဆရာ။
လူနာကို အတူနေရက် မေးလေ့မရှိပါ။ သေချာတဲ့ရက်က နောက်ဆုံးရာသီလာရက်ဖြစ်တယ်။ အဲတာလည်း ပဌမဆုံး သွေးဆင်းရက်ကိုယူတယ်။ ရာသီပြီးတဲ့ရက်ဆိုတာ သိပ်တိကျတာမဟုတ်။ ရက်နဲ့တွက်နည်းထက် အာထွာဆောင်းနည်းက ပိုသေချာတယ်။ အာထွာဆောင်းမရိုက်သေးခင် ဒါမှမဟုတ် မရိုက်နိုင်ရင် နောက်ဆုံးပေါ်ခဲ့တဲ့ ရာသီရက်ကိုသာယူရတယ်။ အာထွာဆောင်းမှာလည်း သိပ်စောရင်နဲ့ နောက်ကျရင် လွဲနိုင်တယ်။ ဘယ်နည်းနဲ့တွက်တွက် ရှေ့-နောက် ၁-၂ ပတ် ကွာနိုင်တယ်။ အမှန်ဆုံးဟာ ကိုယ်ဝန်သက် ၈ ပတ်နဲ့ ၁၈ ပတ်အတွင်းရိုက်တဲ့ အာလ်ထွာဆောင်းအဖြေဖြစ်ပါတယ်။
Expected due date (EDD) = ကလေးဘယ်တော့မွေးမလဲခန့်မှန်းချက်။
Gestational age = အထဲက ကလေးအသက်။
(၁) LMP နောက်ဆုံးရာသီလာခဲ့စဉ်က ပဌမဆုံး သွေးဆင်းတဲ့ရက်ကိုယူပြီး (၉) လနဲ့ (၇) ရက်ပေါင်းထည့်ပေးနည်းကို အများဆုံးသုံးပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အာလ်ထွာဆောင်းကို လက်လှမ်းမမီတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အရေအတွက်က အများကြီး ပိုများပါတယ်။
(၂) အာလ်ထွာဆောင်းမှာလည်း တခါရိုက်ရင် တခါ EDD ထွက်တယ်။ အမေရိကန် သားဖွါးမီးယပ်ကောလိပ် သုံးခုက ပြောတာက ကိုယ်ဝန် (၁၃) ပါတ် + (၆) ရက်နေ့ အာလ်ထွာဆောင်းရိုက်လို့သိရတာက အတိကျဆုံးဖြစ်တယ်။ ဒိထက်စောတာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရင့်တာတွေမှာ ကွဲလွဲချက် နည်းနည်းပိုများတယ်။
(၃) မျိုးဥထွက်ရက်ကို Ovulation tests စမ်းနည်းလုပ်သူမှာသာ သိမယ်။ အဲလိုလုပ်ရသူက အလွန်နည်းတယ်။ IUI and IUTPI ပြင်ပသန္ဓေတည်စေနည်းလုပ်ရသူတွေနဲ့ ကလေးမရနိုင်လို့ မျိုးဥထွက်ဆေးပေးနည်းလုပ်လို့သာ မျိုးဥထွက်ရက် တွက်ကြရပါတယ်။ သူတို့မှာ မျိုးဥထွက်ရက်သိမယ်။ သန္ဓေဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုတာ ကျားသုက်ပိုးနဲ့ မ မျိုးဥတွေတဲ့ရက်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုတွေ့မှာက မျိုးဥထွက်တဲ့နေ့ လို့ အသေယူလို့မရပါ။ သုက်ပိုးနဲ့တွေ့မှာက မျိုးဥထွက်တဲ့နေ့ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ ရှေ့ နောက် ၂-၃-၄ ရက် ကွာနိုင်တယ်။ အဲတာလည်း ပြောစရာရှိပါသေးတယ်။ သုက်ပိုးနဲ့ မျိုးဥတွ့ပြီးနောက် ခန့်မှန်းချေ (၆) ရက်နေမှ သန္ဓေဟာ သားအိမ်အတွင်းနံရံမှာ လာတွယ်ကပ်မယ်။ အဲတာကြောင် မျိုးဥထွက်ရက်သိတိုင်းလည်း တိကျပြီလို့ ပြောမရသေးပါ။
တကယ်မွေးမယ့်ရက်ဟာ (၁) LMP နောက်ဆုံးရာသီလာခဲ့စဉ်က ပဌမဆုံး သွေးဆင်းတဲ့ရက်၊ (၂) Ovulation မျိုးဥ ထွက်တဲ့ရက်နဲ့ (၃) Ultrasound အာလ်ထွာဆောင်းနည်း သုံးနည်းလုံးကတွက်ချက်ထားတဲ့ EDD ခန့်မှန်းထားတဲ့ရက်နဲ့ ရှေ့-နောက် ၁-၂ ပါတ်ကွာမှာသာဖြစ်တယ်။
သုက်ပိုးတွေ သားအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါ သားအိမ်ညှစ်အားကြောင့် သုက်ပိုးတွေဟာ သားအိမ်ပြွန်ဆီကို ကူးခတ်ပြီး ရောက်လာစေတယ်။ သုက်လွှတ်ပြီး နာရီပိုင်းသာကြမယ်။ မျိုးဥနဲ့မတွေ့သေးလည်း သုက်ပိုင်းတွေက နောက်ထပ် (၅) ရက် အထိရှင်နေနိုင်ကြတယ်။ မျိုးဥအိမ်ကနေ မျိုးထွက်လာပြီးရင် (မျိုးဥထွက်တဲ့ရက်) သားအိမ်ပြွန် အဖျားထိပ်က လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ တူတာကနေ ဖမ်းယူပြီး ပြွန်ထဲသွင်းပေးတယ်။ သားအိမ်ပြွန်ညှစ်အားနဲ့ အမွေးလေးတွေကနေ မျိုးဥကို သွားလာမှုမှာ ကူညီပေးတယ်။ အဲဒီခရီးဟာ နာရီ (၃ဝ) ကြာတယ်။ မျိုးဥဟာ မျိုးအိမ်ကနေထွက်လာပြီးနောက် (၁၂) နာရီကနေ (၂၄) နာရီအတွင်းမှာသာ သုက်ပိုးနဲ့တွေရင် သန္ဓေဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ မျိုးစပ်မှုဟာ သားအိမ်ပြွန်တဲ့ (အမ်ပြူလာ-အစ်စမစ်) ဆုံရာနေရာမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီနေရာမှာ နောက်ထပ်နာရီပေါင်း (၃ဝ) နေသေးတယ်။ Fertilization မျိုးစပ်မှုဖြစ်ပြီးရင်တော့ သားအိမ်ထဲကို ခပ်မြန်မြန်ဆင်းလာမယ်။ သားအိမ်ထဲကိုဆင်းလာပြီး သင့်တော်ရာနေရာတခုမှာ သားအိမ်အတွင်းဆုံးအလွှာမှာ နစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တာကို Implantation သန္ဓေကပ်ပြီလို့ ခေါ်တယ်။ မျိုးစပ်မှုဖြစ်ပြီးနောက် (၅) ရက်ကနေ (၆) ရက်အချိန်ကြာမယ်။
ကိုယ်ဝန်မှာ အနည်းဆုံး ၃၇ ပတ်ရှိရင် ကလေးဖွံဖြိုးမှု ပြည့်စုံပါပြီ။ အခုရှင်းပြတာဟာ ဆေးသိပ္ပံအထောက်အထားတွေအရ ဖြစ်ပြီး တကယ့်သက်ရှိလောကမှာ မထင်တာတွေဖြစ်မလာဘူး မပြောနိုင်ပါ။ အုဝဲသံကြားတဲ့နေ့မှာ အတိအကျမွေးပါမယ်။
အာလ်ထွာဆောင်း ရီပို့တ်ရေးတဲ့ ဆရာဝန်တွေက ရက်-လ-နှစ်လို့ မရေးကြတာ ဂွကျတယ်။ ရက်သတ္တပါတ်နဲ့ ရက်ကိုပဲ ရေးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှတ်တမ်းမှာ ရက်သတ္တပါတ်ကိုသာ ယူတယ်။ လကိုမယူဘူး။ နုတ်တဲ့အခါ သင်္ချာတော့ သုံးရတယ်။ ရက်-လ-ခုနှစ် ကိုက်အောင် ရက်သတ္တပါတ် နဲ့ ရက် ကို လဖွဲ့ယူရတယ်။ တခြားနေရာမှာ ဘာသုံးသုံး မွေးလူနာကို သင်္ချာတွက်ရင် တလမှာ ၄ ပါတ်ထား တွက်ကြရတယ်။ ပြက္ခဒိန်ကို မကြည့်ပါနဲ့။ ဘယ်နည်းနဲ့တွက်တွက် ကွက်တိမွေးလာတာ နည်းတယ်။
ကလေးကိုတိုင်းထွာပြီး ကွန်ပြူတာပါ အညွှန်းကိန်းတွေအရ ပျမ်းမျှတွက်ချက်ပေးတယ်။
(၁) (CRL) ခေါင်းထိပ်ကနေ တင်ပါးစွန်းအထိအရှည်၊ ကိုယ်ဝန် ၇-၁၃ ပါတ်မှာစတိုင်းလို့ရတယ်။ တိကျတယ်။ နောက်တခါ ထပ်ရိုက်ပေမဲ့ ဒီကိန်ဂဏန်းက မပြောင်းရဘူး။
(၂) (BPD) ခေါင်းဘေးနှစ်ဘက်အကွာအဝေး၊ ကိုယ်ဝန် ၁၃ ပါတ်နောက်ဆိုရင် တိုင်းလို့ရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ 2.4 cm ရှိနေရာကနေ မွေးခွနီးရင် 9.5 cm ရှိလာမယ်။ ကလေးခေါင်းအရွယ်အစား မတူတတ်တာများလို့ မွေးမဲ့ရက်တွက်ဘို့ရာ ဒီဂဏန်းကို သိပ်အားမကိုးထိုက်ဘူး။
(၃) (FL) ပေါင်ရိုးအရှည်၊ ကလေးတွေက အရပ်ရှည်မှာ မတူတတ်တာများလို့ မွေးမဲ့ရက်တွက်ဘို့ရာ ဒီဂဏန်းကို သိပ်အားမကိုးထိုက်ဘူး။ ၁၄ ပါတ်မှာ 1.5 cm ရှိရာကနေ မွေးကာနီးရင် 7.8 cm ရှိလာမယ်။
(၄) (AC) ဗိုက်အဝန်း၊ အရေးကြီးဆုံး ကိန်းဂဏန်းဖြစ်တယ်။ ကလေး အသက်ထက် အရွယ်အစားနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပိုသိသာတယ်။ မွေးမဲ့ရက်တွက်တာမှာတော့ သိပ်အားမကိုးရဘူး။
• ကိုယ်ဝန် ၂၃ ပါတ် = ၁၇%
• ကိုယ်ဝန် ၂၄ ပါတ် = ၃၉%
• ကိုယ်ဝန် ၂၅ ပါတ် = ၅ဝ%
• ကိုယ်ဝန် ၂၆ ပါတ် = ၈ဝ%
• ကိုယ်ဝန် ၂၇ ပါတ် = ၉ဝ%
• ကိုယ်ဝန် ၂၈-၃၁ ပါတ် = ၉ဝ-၉၅%
• ကိုယ်ဝန် ၃၂-၃၃ ပါတ် = ၉၅%
• ကိုယ်ဝန် ၃၄ ပါတ်ကျော် = ၁ဝဝ% အသက်ရှင်လမ်းရှိသည်။
ယမုန်နာဆေးခန်းလေးမှာ မွေးပြီးသူ ၂ဝ၄ ယောက်ထဲမှာ အတိအကျမွေးသူ ၅ ယောက်ပဲ ရှိတယ်။
• ၁ ရက်စောမွေး ၃ ယောက် (ကျား = ၁၊ မ = ၂)
• ၁ ရက်နောက်ကျမွေး ၈ ယောက် ( ကျား = ၃၊ မ = ၅)
• ၂ ရက်စောမွေး ၃ ယောက် (ကျား = ၁၊ မ = ၂)
• ၂ ရက်နောက်ကျမွေး ၁ ယောက် (ကျား = ၁)
• ၃ ရက်စောမွေး ၂ ယောက် (ကျား = ၁၊ မ = ၁)
• ၃ ရက်နောက်ကျမွေး ၂ ယောက် (ကျား = ၁၊ မ = ၁)
• ၄ ရက် စောမွေး ၁ ယောက် (မ = ၁)
• ၄ ရက် နောက်ကျမွေး ၄ ယောက် (ကျား = ၃၊ မ = ၁)
• ရက်အတိအကျ မွေးသူ ၅ ယောက် (ကျား = ၂၊ မ = ၃)
• ဒီစစ်တမ်းက ဒေလီမှာနေကြရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား၊ ၉ဝ% ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကို အဲလိုစစ်နိုင်ရင် သိပ်စိတ်ဝင်စားဘို့ကောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေ သိနိုင်တယ်။
1. EDD and Gestational age သန္ဓေသက်တမ်း ခန့်မှန်းခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-expected-due-date-edd.html
2. Overdue pregnancy ရက်ကြာနေတဲ့ကိုယ်ဝန် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/11/overdue-pregnancy.html
3. Pregnancy and Expected due date (EDD) ကလေး ဘယ်တော့မွေးမလဲ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/edd-and-gestational-age.html